काठमाडौं । काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) मा आइतबार मर्निङ सिफ्टमा इन्टरनल जाँच चल्दै थियो ।
एकजना शिक्षक कक्षाकोठामा आए र सोमबार (भोलि) हुने भनिएको जाँच अर्को दिनमा सरेको सुचना दिए । लगत्तै विद्यार्थीले प्रश्न गरे, भोलि के को बिदा सर ? ती शिक्षकले उत्तर दिन चाहेनन् । भोलि बिदा भनेर बुझ्नुस भन्दै उनी हिँडे । त्यहिँ बसेका अन्य विद्यार्थीले 'भोलि विप्लवको बन्द' भनेपछि बल्ल थाहा भयो बिदाको कारण !
बाटोमा हिँडिरहेका एकजना मोबाइल कानमा लगाएर साथी सँग कुरा गर्दै थिए । एकपछि अर्को गर्दै साथीलाई फोन गरेर भोलि विप्लवको बन्द हामि आज साँझनै निस्किनुपर्छ भन्दै थिए । सायद उनी त्यो टिमको लिडर हुनुपर्छ । उनीहरुले सोमबार पोखरा जाने योजना बनाएका थिए । भोलिको बन्दको हल्लाले आजै साँझ जानुपर्यो !
बन्दले सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित गर्छ र यसको प्रभाव सबै ठाँउमा पर्छ भन्ने कुरा सर्वावितितै छ । बन्दबाट सबै भन्दा पहिला प्रभावित हुने ठाँउ अहिले विद्यालय क्षेत्र नै बनेको छ । रत्न राज्य कलेजमा मात्र होइन् अधिकासं स्कुल कलेजमा भोलि बन्दको सुचना पुगिसकेको छ । सरकारी भन्दा अझ नीजि स्कुल कलेज कँहा पहिल्यैं बिदाको सुचना दिने गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले विप्लव नेकपालाई समर्थन गर्नेहरुलाई समेत कारबाही गर्ने एक विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिसकेको छ । अधिकांस विद्यालयले बिदाको सुचना बाँडनु समर्थन होकि के भनेर बुझ्ने ?
विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो र पढ्नुपाउनु नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले ग्यारेण्टि गरेको भनेर नेताहरु भन्छन् । बरु बन्दको कारणमाथि छलफल गर्न उनीहरु तयार छैनन् । 'सुःखी नेपाली र समृद्ध नेपाल'को नारा जप्नु नै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको धर्म बनेको छ ।
सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको असर सर्वसाधारणमा घनिभुत हुँदै गइरहेको छ । र विप्लव नेकपाले घोषणा गरेका कार्यक्रहरु वाध्यताबस व्यापक हुँदै गएका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध पछि विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहरेको छ ।
अहिले सम्म ३ सय भन्दा बढि पक्राउ परेर हिरासतमा छन् । गृहमन्त्रालयले 'सर्च एण्ड अपरेसन' अभियान अन्र्तगत घुँडामुनिगोलि हानेर भएपनि पक्राउ गर्न प्रहरी विप्लवका विरुद्ध परिचालन गरेसँगै भोजपुरमा एक कार्यकर्ता मारिए । राज्यपक्षले 'दोहोरो भीडन्त' भनेपनि विप्लव नेकपाले 'पक्राउ गरि गोली हानेर हत्या' गरिएको भनेको छ । 'सरकारी दमन'को 'प्रतिरोध स्वरुप' विप्लवको यो विज्ञप्ति आएको हो । पश्न, यदि यसो हो भने 'विप्लव समस्या'को समाधान कसले खोजिदिने ?